10% Kuvhura Vagadziri & Vatengesi - China 10% Kuvhura Fekitori
Yakapetwa Window Zuva Mumvuri Solar Sunscreen Fireproof Roller inopofumadza Mucheka
Zuva rejira rezuva
Kana runako rwangova rwepamusoro chete, runogona chete kuita kuti maziso afare, kana runako rukapararira kubva mukati, runogona kuita kuti mweya unakirwe, iwe unoziva hupenyu, uye ini ndinokuziva iwe.
Roller blinds chimwe chikamu chemidziyo yakakosha yakapfava mudzimba nyowani. Izvo zvakakosha mukamuri yekutandarira, mubhedhuru, pasofa, nezvimwewo. Ivo vane hukuru hukuru pane yakazara imba yekushongedza mhedzisiro.
China Mugadziri Sunscreen Roller Blinds Fabric Sunshade Curtain Blinds
Formaldehyde uye Amoniya-ine dhayi
Micheka yemumvuri yakasiyanasiyana inowanzoitwa anti-shrinkage, anti-scalding, anti-kuunyana uye kurongedza kwekurapa panguva yekudhaya uye kupedza. Kazhinji, kuyambuka-kubatanidza maitiro kunodiwa, uye formaldehyde inoshandiswa zvakanyanya muchinjiko-unobatanidza mumiririri.
Nekuda kwekusakwana kwemuchinjiko-unobatanidza, formaldehyde iyo isina kutora chikamu pamuchinjiko-unobatanidza maitiro kana formaldehyde inogadzirwa nehydrolysis ichaburitswa kubva kumucheka wezuva, izvo zvinokonzeresa kutsamwa kwakasimba kune yekufema turakiti mucosa, ganda nemaziso, zvichikonzera kuzvimba. , kunyange kukonzeresa kurwara nekenza.
Ruvara HDPE Anti UV Inopetwa Window Sunscreen Roller Rinovhara Anovhara Zuva Mumvuri Mesh
Yakatsemurwa Roller Mapofu
Maitiro ekushongedza imba? Vanhu vazhinji vanenge vanokwenya mhanza nekuda kwekushongedzwa kwemba. Vachafunga nezvekuisa masherufu emabhuku, mapfekero emakamuri ekurara, kuenzanisa machira nemasofa. Nhasi, isu tinokuunzira iwe kushanya kwemavara yekufananidza machira, mabhokisi nemasofa!
Sofa neketeni, sezvinhu zviviri zvakakura zvakapfava mumhuri yekutandarira yemhuri, mhando yecollocation yavo, iro dhivhizheni yechinhu chitsva rakanangana nekunaka kwenzvimbo yese yemumba. Ngatitaurei nezvazvo!